Arsenal oo si lama filaan ah lala xiriirinayo mid ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan Premier League – Gool FM
Arsenal oo si lama filaan ah lala xiriirinayo mid ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan Premier League
Dajiye January 14, 2021
(London) 14 Jan 2021. Wargeysyada gudaha dalka England ayaa waxay shaaca ka qaadeen in mid ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan ee ka xamaasha horyaalka Premier League uu noqday musharaxa ugu cad cad ee noqon kara badelka tababaraha reer Spain Mikel Arteta ee kooxda Arsenal.
Macalinka reer Portugal iyo kooxda Wolverhampton ee Nuno Espírito Santo uu yahay musharaxa ugu cad cad ee noqon kara badelka tababaraha reer Spain Mikel Arteta ee naadiga Arsenal.
Mikel Arteta ayaa la kulmay dhaleeceyn daran mudadii ugu dambeysay, gaar ahaan kaddib guuldaradii weeneyd ee 4-1aheyd oo ay kala kulmeen kooxda Manchester City kulantii tartanka Carabao Cup.
Intaas kaddib, heerka kooxda ayaa aad u fiicnaaday kaddib markii ay adkaadeen afar kulan xiriir ah, laakiin arrintan ayaa laga yaabaa inaan lagu tixgalinin maadaama maamulka kooxda ay mar horeba ka fikireen musharixiinta ku guuleysan karta inay noqdaan badelka tababaraha reer Spain.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa muujiyay in wakiilka caanka ah ee Jorge Mendes, kaasoo wakiil u ah Nuno Espírito Santo uu koox kale ee cusub kaga raadinayo horyaalka Premier League tababaraha reer Portugal.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray inay jiraan wadahadallo xilligan u dhexeeya Jorge Mendes iyo maamulka kooxda Arsenal, kaasoo ku saabsan suurtagalnimada ah in Nuno Santo loo kaxeeyo naadiga reer London muddada soo socota.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Nuno Santo uu ku faraxsan yahay tijaabinta khibrad cusub oo koox kale ah, waxaana laga yaabaa inuu ku dhammaado qabashada booska tababaraha cusub ee Gunners.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Nuno Espírito Santo ee kooxdiisa, Wolverhampton, uu dhici doono xagaaga 2023.
Gary Neville oo muujiyay sida uu ula yaabay natiijooyinka kooxda Manchester United